Shiinaha oo billaabay khad tareen oo toos u tagaya magaalada London - iftineducation.com
Shiinaha oo billaabay khad tareen oo toos u tagaya magaalada London
aadan21 / January 3, 2017
iftineducation.com – Dawladda Shiinaha ayaa billawday khad tareen oo si toos ah u tagi doona magaalada London, tareenkii u horeeyay ayaana hadda wadada ku sii jira.
Tareenkaasi ayaa ka dhaqaaqay magaalada Yiwu oo ku taalla bariga dalka Shiinaha isaga oo wada dhar, boorsooyin iyo alaabada kale ee guryaha wuxuuna magaalada London tagi doonaa mudo labo todobaad gudahood ah.
Alaabta ayaa la saari doonaa tareenno kale oo jooga goobaha ay ku kala wareegaaan tareennadu.
Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyay sare u qaaday ballaarinta khadadka tareenada ee sida tooska ah u taga magaalooyin Yurub ku yaalla, arrintaas oo qayb ka ah mashruuc ay ugu yeeraan New Silk Route.
Adeegani wuxuu ganacsatada alaabada dhoofisa siin doona hannaan u dhexeeya midka ay alaabadooda maraakiibta saaraan oo raqiis ah balse wakhti dheer qaata iyo midka dhakhsaha badan ee diyaaradaha xamuulka la adeegsado oo qaali ah.
Spain oo qabatay qof tahriib ahaa oo lagu qariyay boorso
Sacuudiga: ‘Shaqaale ajnabi oo lagu xukumay xabsi markii ay mishaar waydiisteen’